नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : काँग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिवाट आश गर्नु भन्दापनि एमाओवादीले जेजे नयाँ एजेन्डा फाल्छ, त्यही एजेन्डा बोकेर हिँड्ने गरेकाले सहमति जुट्न सकेन: चित्रवहादुर केसी
काँग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिवाट आश गर्नु भन्दापनि एमाओवादीले जेजे नयाँ एजेन्डा फाल्छ, त्यही एजेन्डा बोकेर हिँड्ने गरेकाले सहमति जुट्न सकेन: चित्रवहादुर केसी
‘काँग्रेस-एमाले एमाओवादीको पासोमा परे’
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रवहादुर केसीले विपक्षी दल कांग्रेस-एमाले सधैँ एकीकृत माओवादीको पासोमा पर्दै आएको वताउनु भएको छ । काँग्रेस-एमालेले एमाओवादीको रणनीति बुझ्न नसकेकाले पनि उनीहरु जाना जान माओवादीको पासोमापर्दै आएको केसीको टिप्पणी छ । केसीले काँग्रेस-एमाले राष्ट्रपतिवाट आश गर्नु भन्दापनि एमाओवादीले जेजे नयाँ एजेन्डा फाल्छ, त्यही एजेन्डा बोकेर हिँड्ने गरेकाले सहमति जुट्न नसकेको वताउनुभयो । आइतवार विहान अनलाइनखबरसंग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष केसीले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सजिलै राजीनामा नदिने भएकाले विपक्षी दल आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको वताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’एमाओवादी र प्रधानमन्त्रीले सहमति चाहदैनन् । त्यसैले उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बर्हिगमनका लागि शसक्त आन्दोलन आवश्यक छ ।’केसीले भन्नुभयो, ‘शनिवार बेलुकी भएको विपक्षी छलफलले एमाओवादीको जालमा नफस्ने र आन्दोलनमा जाने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले सोमबार बस्ने बैठकले आन्दोलनको घोषणा गर्छ ।’ उहाँले मोहन बैद्यको नेतृत्वमा रहेको नेकपा-माओवादीलाई पर्खन आइतवारको वैठक स्थगन गरी सोमबार सारिएको वताउनुभयो ।केसीले भन्नुभयो,’ सरकारविरुद्धको आन्दोलन भएकाले पनि वैद्य माओवादीको साथ आवश्यक छ । माओवादीलाई पनि साथमा लिएर आन्दोलनमा शसक्त रुपमा जानुपर्छ ।’ केसीले नेमकिपा, राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, फोरम नेपाल पनि विपक्षीको कित्तामा आइसकेकाले धूर्वीकरण नुहने वताउनुभयो । सत्य निरुपण आयोग नबनाउने कार्यमा एमाओवादीसहित कांग्रेस-एमालेवीच अघोषित सहकार्य रहेको केसीले आरोप लगाउनुभयो । आफ्नो पार्टी दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको विरोधमा अग्र पंक्तिमा रहेको भन्दै उहाँले पक्राउ परेकाहरुलाई कडा कारबाही गर्नु पर्ने वताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो,’राजमो जहिलेपनि दोषीलाई कारवाही गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिनु पर्छ भन्ने पक्षमा छ । त्यसैले द्वन्दकालमा साधारण जनतालाई यातना दिएका कर्नेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ परेकोमा स्वागत गरेको हो ।’ उहाँले सुरक्षा अपराधमा तत्कालीन माओवादीभन्दा राज्यपक्ष हजारौं गुणा वढि दोषी रहेको वताउनुभयो । केसीले राष्ट्रिय सहमतिविना सरकारले सिफारिस गरेका कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पारित गर्न नहुने वताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,’संसद नरहेका वेला कुनै पनि अध्यादेश पारित हुन दलहरुवीचको राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु आबश्यक हुन्छ । त्यसैले सहमतिविना सिफारिस भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनु पर्छ ।’ केसीले शासन चलाउन सरकारलाई चाहिने अध्यादेश जारी गरिरहने काम राष्ट्रपतिले अब रोक्नु पर्ने वताउनुभयो । उहाँले सहमतिविना नै राष्ट्रिपतिले अध्यादेश पारित गर्दा दलहरुवीच झनै वादविवाद बढ्ने र मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र पूर्वराजा सबै तानिन्छन्
- चित्रबहादुर केसी
हो । मानवताविरोधी अपराध गर्ने, यद्ध अपराध गर्नेहरुलाई कारवाही कहीँ पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ । घरघरबाट निकाले जनतालाई सुरक्षा निकायले निर्मम हत्या गरेको छ । कथित जनयुद्धको विरुद्ध अभियान चनाउने जनमोर्चाका कार्यकर्ता पनि मारिएका छन् । सुरक्षा निकायले जनताका घरमा आगो लगाएका छन्, बलात्कार गरेका छन् । नागरिकलाई बेपत्ता पारेका छन् । यिनको हिसाब-किताब आज एमाओवादी वा कांग्रेस, एमाले सत्तामा भएका बेला नभए पनि ढीलो चाँडो नेपाली जनताले खोज्छन् र खोज्नुपर्छ । - source Online khabar